जेट एयरवेजका कर्मचारीले गरे आत्महत्या ! -
जेट एयरवेजका कर्मचारीले गरे आत्महत्या !
April 28, 2019 अखवार अनलाइनLeaveaComment on जेट एयरवेजका कर्मचारीले गरे आत्महत्या !
एजेन्सी । भारतीय जेट एयरवेजका एक कर्मचारीले आत्महत्या गरेका छन् । वित्तीय संकटमा गुज्रिरहेको जेट एयरवेजका प्राविधिक कर्मचारी ५३ वर्षीय शैलेष कुमार सिंहले आत्महत्या गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
उनी गत मार्चदेखि पेटको क्यान्सरबाट पीडित थिए । जेट एयरवेजमै कार्यरत उनको जेठो छोराले पनि तलब पाएका छैनन् । रोगले च्याप्दै लगेको बेला उपचार गर्ने खर्च नभएपछि शैलेष सिंहले घरको चार तला माथिबाट हाम फालेर आत्महत्या गरेका हुन् ।
चार महिनायता स्वास्थ्य जटिल बनेपछि शैलेषलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । शुक्रबार उनलाई अस्पतालबाट घरमा ल्याइएको थियो । त्यसैदिन उनले घरको चौथो तलाबाट हाम फालेर आत्महत्या गरेको भारतीय प्रहरीले जनाएको छ । जेट एयरवेजका धेरै कर्मचारीले वित्तीय संकट सुरु भएपछि तनाव भइरहेको बताएका छन् ।
सडकमा कोही मागेर हिँडेको देखे फोन गर्नुस् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
पोखराको बीच सडकमा बिदेशी महिला नाँगै हिडिन्, सबै परे तीन छक्क
आज कुसे औसी घरघरमा कुस भित्राउदै, बाउको मुख हेर्ने दिन
August 30, 2019 August 30, 2019 अखवार अनलाइन
June 21, 2019 June 22, 2019 अखवार अनलाइन
प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा गार्ड मेजर राजेन्द्रबहादुर शाही जुवाको खालबाटै पक्राउ
विंसं. २०७६ जेठ ३ गते शुक्रबारको राशिफल कस्तो छ भाग्य हेर्नुहोस आज गुडफ्राइडे मनाउनुहोस